Ahoana ny fomba hanaovana fikarohana amin'ny feo amin'ny Youtube? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 785
Ny platform YouTube dia tsy sasatra velively manavao sy manolotra zava-baovao ho an'ny mpanaraka azy tsirairay avy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiditra ny safidin'ny manao fikarohana amin'ny feo amin'ny fomba mora sy haingana be. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io lohahevitra io ianao, dia aza miala amin'ny lahatsoratra manaraka.
Ny fanaovana fikarohana am-peo ao amin'ny YouTube dia iray amin'ireo lahasa farany indrindra izay nampidirin'ny YouTube na amin'ny fampiharana finday na ao amin'ny kinova desktop. Ankehitriny ny fikarohana ao amin'ity sehatra ity dia haingana kokoa sy mahazo aina kokoa. Tsy ilaina intsony ny mila manoratra vao mahita atiny vitsivitsy.
Mikaroha feo amin'ny tranokala YouTube
Vao tsy ela akory izay, ny sehatra YouTube dia nampiditra ny mety hanaovana fikarohana amin'ny feo amin'ny alàlan'ny kinova desktop. Nahazo tsara an'ity fanavaozana vaovao ity ny mpampiasa, ary ny tsara indrindra, ny fampiasana an'io endri-javatra io dia iray amin'ireo zavatra tsotra indrindra azontsika atao ao anatin'ny pejy.
Mikaroha feo amin'ny YouTube manamora ny raharaha rehefa manandrana mitady atiny ao anatin'ity sehatra ity. Raha mitondra fiara ianao ary te hitady horonan-tsary dia tsy mila manoratra intsony ianao, izao vao miresaka fotsiny dia afaka mahita ilay horonantsary tadiavinao.
Eto ve ny sasany amin'ireo dingana manaraka Mba hanatanterahana fikarohana amin'ny feo avy amin'ny kinova desktop an'ny YouTube:
Dingana 1: zahao raha manana safidy azo atao ianao
Ny zavatra voalohany tokony hataonao zahao raha efa niasa ao anaty kaontinao ity safidy ity. Mba hanaovana izany dia mila miditra amin'ny mailaka sy teny miafina fotsiny ianao.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny lampihazo ianao dia tsy maintsy manamboatra ny masonao amin'ny bara fikarohana hita eo an-tampon'ny efijery. Raha mijery ny sary mikrô Midika izany fa manana safidy azo atao ianao ary afaka manao fikarohana amin'ny feo ao anaty lampihazo.
Dingana 2: Manaova fikarohana amin'ny feo
Rehefa avy nanamarina fa ny fitaovana dia afaka ao amin'ny kaontintsika dia afaka miroso amin'ny fanaovana fikarohana amin'ny feo amin'ny Youtube. Mora sy haingana be ny fanaovana azy.
Manana trosa fotsiny isika tsindrio ny kisary mikrô izay miseho eo akaikin'ny bara fitadiavana. Raha sambany mampiasa ity fitaovana ity ianao dia hiseho ny efijery fahazoan-dàlana mahazatra. Eo ianao dia tsy maintsy manaiky ny fepetra mba handroso.
Afaka manomboka izao ianao ampiasao ny fitaovana fikarohana ny feo tsy misy fanelingelenana. Tsindrio ny microphone ary asehoy hoe inona no tadiavinao ao anatin'ny sehatra.
Zava-dehibe izany miteny mafy sy mazava hahafahan'ny Youtube manatanteraka ny fikarohana amin'ny fomba mahomby. Azonao atao ny mitady izay atiny tadiavinao, eny fa na ny famandrihana, horonan-tsary tianao, na horonan-tsary manokana.
Ampiasao ny fitaovana avy amin'ny App
Afaka manao ihany koa ireo mpampiasa manatanteraka fikarohana amin'ny feo avy amin'ny fampiharana finday avy amin'ny YouTube. Ity no fomba ahafahanao manao azy:
manokatra ny fampiharana amin'ny findainao
tsindrio ambonin'ny kisary mikrô (eo akaikin'ny bara fikarohana)
Ny fampiharana dia mihaino, ka lazao azy izay tianao tadiavina ao anaty lampihazo.
Hisy valiny samihafa hiseho. Safidio ny safidy mety ary izany no izy
1 Mikaroha feo amin'ny tranokala YouTube
2.1 Dingana 1: zahao raha manana safidy azo atao ianao
2.2 Dingana 2: Manaova fikarohana amin'ny feo
3 Ampiasao ny fitaovana avy amin'ny App